शनिबार प्रेरणा | Martech Zone
शनिबार, मार्च 3, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
मेरो छोरा, बिल, उसको हाई स्कूलको द विजार्ड अफ ओजको प्रदर्शनको लागि ध्वनि उत्पादनलाई अग्रणी गर्दैछ। मेरो छोरी पनि यसमा हुन गइरहेको छ, एउटा munchkins खेल्दै। केटीले पहिले नै खेलमा व्यक्तिहरूले केही बौद्धिक समीक्षाहरू प्राप्त गरिरहेकी छन ... वास्तवमै राम्रो छ किनकि उनी केवल मिडिल स्कूलमा छिन्! यो पनि उनको लागि एक तन्का थियो खेल मा प्राप्त जान सक्षम हुन। यद्यपि उनी बिल्कुल माया गर्छिन्। म सधैं मेरो दुबै बच्चाहरूको प्रतिभामा छक्क पर्छु।
तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, मेरा दिन र रातहरू अब ओजको विजार्डका गीतहरूले भरिएका छन्। मेरो छोराले "यदि मसँग मुटु हुँदो भएँ" लाई आधुनिक ध्वनिक संस्करणमा लेखेका थिए। उसले यो घर बाहिर प्रदर्शन गरेको छैन, यद्यपि। म उसलाई गिटार मात्र लिन र यसलाई अभ्यासमा एक विश्रामको बखत बजाउनको लागि अलि प्रेरित गर्न चाहान्छु।
जब मैले यो भिडियो RR.e.Medium मा देखेको थिएँ, तब मैले त्यसलाई देखाँए र यसले उनलाई गिटार आजै रिहर्सलमा ल्याउन प्रेरित गर्यो। मेरो छोरोलाई भीडको मनोरन्जन गर्नमा कुनै समस्या छैन ... तर त्यस्तो भीड होईन जुन के हुँदैछ थाहा छैन। पेरिस मेट्रोमा प्रदर्शन कल्पना गर्नुहोस्! यी ती हुन् जुन यी अविश्वसनीय प्रतिभाशाली मानिसहरूले गरे:
हुनसक्छ यसले तपाईलाई प्रेरित गर्दछ! यसले मेरो छोरोलाई प्रेरणा दियो!
पुनश्च: हिजो राती म पनि थियो बिल भाडामा दि ताकि हामी गतिको परिवर्तन पाउन सक्दछौं। 😉
मार्क्स 3, 2007 मा 1: 26 PM
मसँग कुनै सांगीतिक प्रतिभा छैन तर म सधैं एउटा ठाउँमा हिंड्न र आमालाई बाहिर निकाल्न चाहन्थें, मैले क्विन्सी जोन्सलाई बन्द गरें, यो जाँच गर्न ढिलो जामहरू, बस सोच्नुहोस् डग, यो तपाईं, म र क्रिस हुन सक्छ। शिकागोमा EL, यसलाई प्रयास गरौं। राम्रो विचार, तपाईं र क्रिस यसलाई प्रयास गर्नुहोस् र म भिडो क्यामेरा समात्नेछु! राम्रो काम
मार्स 4, 2007 मा 10: 56 एएम
म तपाईंसँग छु, जेडी! म एक नोट बोक्न सक्छु र म लगभग 100 पाउन्ड पहिले नाच्न सक्षम थिएँ। म मेरो छोरालाई धनी र प्रख्यात हुँदा म उहाँसँग स्टेजमा कम्तिमा एउटा गीत गाउनेछु भनेर भनिरहन्छु।
मलाई लाग्छ उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ। 🙂
मार्क्स 3, 2007 मा 4: 56 PM
नॉनपॉइन्टसँग फिलको अनुभवको उत्कृष्ट रक संस्करण छ (हावामा आज राती)
मार्क्स 4, 2007 मा 7: 20 PM
माफ गर्नुहोस्, यो Mushroomhead द्वारा रिलीज मा लुकेको ट्र्याक थियो
मार्क्स 4, 2007 मा 7: 28 PM
त्यो कुन एल्बममा थियो ? मेरो छोरालाई च्याउ मन पर्थ्यो। म आफै SlipKnot को प्रशंसक हुँ... विशेष गरी ट्राफिकमा र म मेरो रिस बाहिर निकाल्न चाहन्छु। या त त्यो वा कुख्यात ठूलो (म सबै कुरा सुन्छु!)
मार्क्स 3, 2007 मा 9: 49 PM
हे-मलाई साँच्चै समूह मन पर्यो। यो साझा गर्नुभएकोमा धन्यवाद। अरू सबै अझै मेरो टाउको माथि जान्छ! (ps. मैले माइकलाई उसको साइटमा थप सामग्री प्राप्त गर्न भन्नु पर्छ!)